Shock Absorber အစိတ်အပိုင်းများ
Piston Rod ၊
Buffer နှင့် ဖုန်အဖုံး
ဆိုင်ကယ် Shock Absorber
Strut Bearing ၊
အတွင်း Tube၊Outer Tube
Coilover နှင့် Air Suspension
Yoga နှင့် Pilates
Functional Equipment များ၊
ကား Shock Absorber
သင့်ကားအတွက် သင့်လျော်သော shock absorber (coilover) ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ကိုက်ညီသောအရည်အချင်းများ 1. ထုတ်ကုန်သည် 2-3 လက်မ elevation လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ အချို့သောထုတ်ကုန်များသည် အမြင့် ၂ လက်မသာရှိသည်။3လက်မ အမြင့်ကို အနည်းငယ်သာ အသုံးပြုပြီးနောက်၊ လမ်းကြမ်းတွင် ကန့်သတ်ချက်သို့ ဆွဲယူရန် လွယ်ကူပြီး ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ ဗဟိုမှန်ပြောင်းလှံတံ၏ အချင်းရှိမရှိ...
Shock absorber -coilover အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး
ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုသည် ကား၏ချောမွေ့မှု (သက်တောင့်သက်သာ) တိုးတက်စေရန် ဖရိန်နှင့်ကိုယ်ထည်တုန်ခါမှုများကို အရှိန်မြှင့်ရန်၊ ကားအများစုတွင် ဆိုင်းထိန်းစနစ်အတွင်း ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာများကို တပ်ဆင်ထားသည်။ ကားတစ်စီး၏ ရှော့ခ်စုပ်စနစ်သည် စပရင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ...
Shock absorber အခြေခံ အသိပညာ-၂
Max Auto မှထုတ်လုပ်သည့် ရှော့ကေးစုပ်စက်တွင် ဆီအမျိုးအစားနှင့် ဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစား၊ twintube နှင့် mono tube များပါဝင်ပြီး ၎င်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ တွင်ကျယ်စွာရောင်းချခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ အာဖရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ တောင်အာရှနှင့် တောင်အမေရိကတို့ ပါဝင်သည်။ ...
Shock absorber အခြေခံ အသိပညာ-၁
ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာ (Absorber) သည် ရှော့ခ်ကို စုပ်ယူပြီးနောက် နွေဦးပေါက်မှ ပြန်တက်လာသောအခါ ရှော့ခ်ကို နှိမ်နှင်းရန် အသုံးပြုသည်။ ဖရိမ်နှင့် ကိုယ်ထည် တုန်ခါမှု လျော့ပါးသွားစေရန် မော်တော်ကားများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်...
သင့်တော်တဲ့ Shock Absor ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ...
ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အီးမေးလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချန်ထားခဲ့ပါ ကျွန်ုပ်တို့ 24 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်လာပါမည်